Muhaajiriintii ugu badnayd oo gashay Hungary - BBC News Somali
Muhaajiriintii ugu badnayd oo gashay Hungary
Image caption Qaxootiga Yurub ku qulqulaya ayaa u badan reer Suuriya.
Tiradii ugu badnayd ee dadka muhaajiriinta iyo qaxooti aha ayaa sabtigii u tallaabay dhanka dalka Hungary.
In ka badan afar kun oo qof oo lugeynaya ayaa galay dalkaasi Hungary iyaga oo ka tallaabay xudduuda uu dalkaasi la leeyahay dalka ay jaarka yihiin ee Serbia, xilli mas'uuliyiinta Hungary ay dhameystirayeen xaydaab ay dhigayaan xuduudda.
Dhanka kale, muran ku aadan sida loola dhaqmayo dadka muhaajiriinta ah ayaa hareeyay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya waddamada Hangary iyo Austraia.
Dowladda Hangary ayaa u yeertay safiirka Austria u fadhiya dalkeeda, waxaana wasiirka arrimaha dibadda Hungary uu cambaareeyay hadal ka soo yeeray hoggaamiyaha Austria Werner Faymann, oo is barbardhigay ku sameeyay sida xukumadda Budapest ay ula dhaqmeyso dadka qaxootiga ah iyo sidii Naaziga Jarmalka uu ula dhaqmay Yuhuudda.
Arrintani ayaa ku soo beegmayso xilli isu soo baxyo dhowr ah oo is diidan ay ka dheceen guud ahaan qaaradda Yurub.
Isu soo baxyadani ayaa intooda badan lagu taageerayay dadka qaxootiga ah basle isu soo baxyo kale oo dhowr ah oo iyagana ka dhacay bartamaha Yurub ayaa waxaa looga soo hor jeesaday qaxootiga qaaradda Yuurb ku sii qulqulaya.